आत्मविश्वास : क्यान्सरको शत्रु - स्वास्थ्य जानकारी - नारी
आत्मविश्वास : क्यान्सरको शत्रु
डा राजेन्द्र बराल, वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ
मानिसको शरीर सूक्ष्म कोषिकाको समूह मिलेर बनेको हुन्छ । ती कोषिकाहरूको अनियन्त्रित वृद्धि भएर मानिसको शरीरले रोकथाम गर्न नसक्नु नै क्यान्सर हो । यसलाई नेपालीमा अर्वुद रोग भनिन्छ । मानिसको सबै अङ्गमा कोषिकाहरू हुन्छन् जुन आवश्यकभन्दा फरक तरिकाले बढ्न गएमा क्यान्सर रोग लाग्छ । जुन अंगमा कोषिका वृद्धि भयो त्यहीँ क्यान्सर सुरु हुन्छ । फोक्सोका कोषिकाहरू अनियन्त्रित भएर बढे भने हामी फोक्सोको क्यान्सर भएको भन्छौ । तर यो नियमितभन्दा पनि कोषिका वढ्ने क्रम दुईबाट ४ चारबाट ८, ८ बाट सय हुदै लाखौ कोषिका बढ्न थाल्छन् । त्यसरी बढ्न थालेपछि सम्बन्धित मानिसको नियन्त्रण बाहिर जान्छ र क्यान्सर बन्दै जान्छ ।
किटाणु र भ्रम
सामान्य रूपले हेर्दा कोषिका वढ्ने कारण शरीरमा हुने इन्फेक्सनले हो । यो किटाणुको काराणले हुने इन्फेक्सन भने होइन । जनमानसमा क्यान्सर किटाणुका कारण हुन्छ भन्ने भ्रम छ तर यस्तो रोग हो जसको कारक किटाणु हँुदैन । क्यान्सरको किटाणु हुदैन भन्यो भने धेरैले पत्याउँदैनन् । जब कि क्यान्सर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किटाणु पसेर लाग्ने रोग होइन । किटाणुबाट लाग्ने नभएकै कारण क्यान्सर जुठो खाँदा, अंगालो मार्दा वा सहवास गर्दा सर्दैन अर्थात् यो एउटा विरामीबाट अर्को स्वस्थ मानिसमा सर्ने सरुवा रोग होइन ।
धनी गरीव छुट्याउदैन
यो रोग मानिसको निश्चित ठाउँमा लाग्छ भन्ने पनि हुदैन । यो शरीरको जुनसुकै अंगमा लाग्नसक्छ । यो रोगले पुरुष वा महिला पनि छु्ट्याउदैन । गरिब र धनी पनि भन्दैन, सुगमको हो कि दुर्गमको भनेर छान्दैन अनि बालक वा वृद्ध पनि भन्दैन । यो रोग जोसुकैलाई जुनसुकै बेला लाग्नसक्छ ।
सानो उमेरमा विवाह गर्ने, उमेर नपुगी धेरै जनासंग यौनसम्पर्क गर्ने, धेरै बच्चा जन्माउने महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ । अविवाहित, ढिलो विवाह गर्ने, बच्चालाई स्तनपान नगराउनेलाई स्तन क्यान्सरको सम्भावना वढी हुन्छ ।
क्यान्सरको लक्षण तह अनुसार देखिने हुदैन । जुनसुकै क्यान्सर सुरुमा लक्षण विहिन हुन्छ । यसलाई पत्ता लगाउन गाह्रो ह्ुन्छ । त्यही भएर हाम्रोमा ७५ देखी ८० प्रतिशत विरामीहरू ढिलो अवस्थामा मात्र चिकित्सककहाँ आइपुग्छन् । त्यतिबेलासम्म क्यान्सर तेस्रो वा चौथो तहमा पुगिसकेको हुन्छ । त्यसमा पनि क्यान्सर विशेषज्ञकहाँ त अन्य स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गरिसकेपछि झन् ढिलो गरी पुग्ने हुनाले उपचारले काम नगर्ने अवस्था आइसकेको हुन्छ ।
सवै प्रकारका क्यान्सरमा प्रथम चरण, दितिय चरण, तृतीय चरण, चौथो चरण र कुनै–कुनै क्यान्सरको पाँचौँ चरण पनि हुन्छ । जति चरण ढिलो हुदै गयो उपचार हुने सम्भावना कम हुदै जान्छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ– ‘क्यान्सर निको हुन्छ, सुरुमा उपचार गरे ।’ हरेक क्यान्सरको चरण फरक–फरक हुन्छ त्यो कुन स्थानमा फैलिएको छ त्यसका आधारमा हुन्छ । जस्तो फोक्सोमा, मस्तिष्कमा, हातमा अन्य स्थानमा कहा फैलिएको छ त्यही अनुसार हुन्छ । त्यसका साथै कति फैलिएको छ, कति गिर्खा छन् त्यो अनुसार पनि चरण भन्ने गरिन्छ । यसको चरण पत्ता लगाउन, सिटी स्क्यान, एमआर आई, वायोप्सी रिपोर्ट, ब्लडको रिपोर्ट आदि अध्ययन गरिन्छ तर लक्षणलाई पहिचान गर्न गाह्रो छ ।
लक्षण देखिनासाथ सजग भएमा पहिलो चरणमै समस्या पहिचान हुनसक्छ । अलि ढिला भयो भने उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ । बेलैमा उपचार गर्ने भनिए पनि क्यान्सरको तह थाहा नहुनसक्छ किनभने हरेक क्यान्सरको स्टेजीङ्ग गर्ने फरक–फरक तरिका हुन्छ ।
क्यान्सरका सम्भावित प्राथमिक लक्षणहरू
हतपत निको नहुने खोकी लागेमा वा धोद्रो स्वर आएमा ।
कोठीको रंग र आकारमा परिर्वतन देखा परेमा
स्तन वा शरीरका अन्य भगमा दुख्ने वा नदुख्ने गिर्खा आएमा
निको नहुने पुरानो घाउ भएमा
दिसा या दिसाको बानीमा फरक परेमा
कुनै पनि ठाउँबाट अत्यधिक रक्त श्राव वा पिप श्राव भएमा
खाना निल्न गाह्रो भएमा वा अपच भएमा
विनाकारण वजन घटेमा
क्यान्सर रोग कसैलाई लागेमा यी आठमध्ये कुन न कुनै लक्षणहरू पक्कै देखा पर्छ ।
ट्युमर के हो ?
शरीरको कुनै पनि भागमा मासुको डल्ला बढ्नुलाई ट्युमर भनिन्छ । यो पनि शरीरमा कोषिका बढेर नै हुने हो । सवै ट्युमर क्यान्सर हैनन् तर सवै क्यान्सर ट्युमर हुन् । शरीरमा दुई किसिमका ट्युमर देखिन्छन् । वेनिजीन र मेलेगान्ट ट्युमर हुन्छ । यसमा वेनीजीनलाई राम्रो खालको ट्युमर भनिन्छ । यो विस्तारै शरीरको आवश्यकता अनुसार बढ्दै जान्छ । यो खराव क्यान्सर हैन । तर मेलेगान्ट क्यान्सर बनाउनसक्ने ट्युमर हो । यो चाडै एक ठाउबाट अर्को ठाउमा सर्छ । फैलनसक्छ । यो क्याप्सुलमा बाँधिएर बसेको हुदैन । कुन खालको ट्युमर हो भन्ने कुरा जाँच गरेपछि मात्र छुट्टिन्छन् ।
कुनै–कुनै क्यान्सर वंशाणुगत पनि हुन्छन्
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट
ढुसी परेको खाना खाँदा
अत्यधिक नुन सेवन गर्दा
प्रीजरभेटीभ केमिकल हालेको खानेकुरा खाँदा
कुनै–कुनै क्यान्सर वंसाणुगत पनि हुन्छन् । पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर ५ देखी १० प्रतिशतसम्म वंशाणुगत हुनसक्छ तर फोक्सोको क्यान्सर वंशाणुगत हुदैन ।
कुनै रेडियसनले पनि क्यान्सर ल्याएको हुन्छ ।
कतिपय विभिन्न क्यान्सरको बेग्लाबेग्लै कारण हुन्छन् ।
नेपालमा फोक्सोको क्यान्सर बढी
नेपालमा महिला र पुरुष दुवैमा फोक्सोको क्यान्सर बढी देखिएको छ । धूमपान र मद्यपानको सेवन बढी भएकाले यसो भएको हुनसक्छ । अन्य क्यान्सर भने ठाउँअनुसार फरक देखिएको छ । काठमाडौंमा पेटको क्यान्सर बढी देखिएको छ भने चितवनमा मुखको क्यान्सर बढी छ । महिलाहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर प्रमु्ख समस्या छ भने स्तन क्यान्सर दोस्रो स्थानमा छ । ४० प्रतिशत क्यान्सर रोग रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार खानपानमा ध्यान दिन सके र जीवनशैली बदल्ने हो भने ४० प्रतिशत क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिन्छ । पहिला क्यान्सर लागेपछि केही उपाय छैन भन्ने चलन थियो तर अहिले क्यान्सर लागेर उपचार गरेका ३० औ वर्षसम्म बाँचेका उदाहरण धेरै छन् । त्यसकारण यो रोगको सवैभन्दा ठूलो औषधि आत्मबल हो । आत्मबल बढी भएका विरामीलाई औषधीले काम गरेको देखिन्छ ।
यी कुरा जानीराखौँ
खानपानमा विचार गर्ने ।
शंकास्पद लक्षणहरू देखिनासाथ चिकित्सककहाँ गएर देखाउने ।
महिलाहरूले लाजको सामाजिक बन्धनभन्दा माथि उठेर चिकित्सकलाई देखाउने ।
नियमित स्वास्थ्यजाँच गराउने ।
क्यान्सर सरुवा रोग होइन, वेलैमा थाहा पाएर राम्रोसँग उपचार गरे निको हुन्छ ।
(भिषा काफ्लेसँगको कुराकानीमा आधारित)
श्रावण २०, २०७४ - आत्मविश्वास बढेको महसुस
जेष्ठ ४, २०७३ - कति छ आत्मविश्वास ?
वैशाख २९, २०७३ - कति छ आत्मविश्वास ?